Soomaali / Barnaamijka Taageerada Ardayda
Mashruuca REACH: Waxbarasho loogu talo galay dhalinta hoy la’aanta ah
Waxbarsho loogu talo galay dhalinta hoy la’aanta ah Project REACH wuxuu u fidiyaa taageero waxbarsho ardada ama qoysaska ay haysato hoy la’aan (homelessness). Adeegyada uu mashruucu ka caawiyo ardaygu waxaa ka mid ah ka diiwaan-galinta ardayga iskuul, u qorshaynta gadiidka iskuullada,u raadinta waxyaabaha sida (caafimaadka, adeegyada xagga sharciga, cunno, dhar iyo guryaha) iyo ka caawinta qalabka iskuulka.
Ardadu iyo qoysasku waxaa laga yabaa inay mutays haddii ay ku noolyihiin shelter, motel/hudheel,gaari dhushiis, xero, wadada, ama ay la noolyihiin ehello ama asxaab oo xaalada dhaqaale darted aysan u helikarin meel kale oo ay ku noolaadaan. Waxii akhbaar dheeraad ah soo wac 651-744-2565.
Ka shaqaynta isku xidhka adeegyada ardayda ku jira (Foster Care) korriinka loo hayo
Adeegyada isku xidhka ee ardayda foster care waxay siinaysaa taageero waxbarasho. Waxaa ka mid ah adeegyadan in ilmaha laga diiwaan galiyo iskuul loona sameeyo gaadiid geeya kana soo qaada iskuula si loo ilaaliyo in ilmuhu ku xasilo iskuulka. Wixii faah faahin ah, fadlan wac 651-744-2565.
Sinaan iyo Dex-dhexaad
Barnaamijka Out for Equaty wuxuu ku dadaalayaa sidii loo ilaalin lahaa in iskuulladu noqdaan meel amaan u ah soona dhaweysa qoysaska, shaqaalaha iyo ardayda isu aqoonsan inay yihiin (lesbian, gay, bisexual, transgender, two-spirit, and queer (LGBTQ). Out for Equity) waxay u fidinaysaa taageero dhinaca xirfadaha iyo wax barasahda ah taasoo ka caawinaysa ardayda inay helaan kalsooni iyo inay xishmeeyaan dadka kale. Ardayda dugsiga sare waxay helayaan caawimaad dheeraad ah sida ururada kaalmada ardayda ama kuwa loo yaqaano Gender Sexual Alliances (GSA). Fursado khaas ah sida hawlaha hoggaamiyenimo ee dabbaal-degga dhaqanka LGBTQ. Wixii faah faahin ah, fadlan soo wac 651-744-6095.
La-talinta Iskuulka Dhexdiisa ah
La-taliyeyaasha iskuulka oo haysta shati ayaa ardayda ka caawiya:
Hawlaha dhinaca tacliinta
Taageerida dhinaca bulshada ah
U’diyaargarowga kuleejka ama shaqooyinka
La-taliyeyaasha iskuulka waxay la shaqeeyaan ardayda fasallada K-12 iyagoo siiya cashirro, si gooni-gooni ama koox-koox ah ula taliya ardayda. Iyagoo kaashanaya ardayda iyo qoysaska, La-taliyeyaasha iskuulku waxay ku dadalaan inay arday walba ka caawiyaan sidii uu ku guulaysan lahaa.
Barnaamijka Hagidda iyo Latalinta ee Wanaagsan
Qaar ka mid ah dadka aduunka gaaray guusha ugu badan waxay lahaayeen dad lataliya oo ay ku daydaan- qof ay aamini karaan oo ay taladiisa raaci karaan. Barmaamijka Murabiga wanaagsan wuxuu isku dhafayaa hoogaamiyaal ganacsato ah oo gobolkeena ka yimid iyo kooxo arday wiilal ah oo kujira fasalada 10-12-aad oo isugu jira African American, American Indian, Asian iyo Latino bishiiba hal-mar. Ardaydu waxay helayaan taageero la xiriira kuleejka iyo qorshaynta xirfadaha shaqada, barashada xirfado shaqo, sameysashada taariikh shaqo iyo waxbarasho (resume), iyo in ay booqdaan ganacsiga gudaha. Akhbaar dheeraad ah, wac 651-603-4941 ama booqo spps.org/mep.
Hay’ada Genesys Works
Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul waxay iskaashi la sameeyeen hay’ada Genesys ee Shaqooyinka oo ah hay’ad aan macaash doon ahayn taas oo ku xirta ardayda dusiga sare ganacsiyo raadinaya shaqaale aqoon u leh tignoolojiyada. Ardaydu waxay dhamaystirayaan tababaro soconaya dhowr asbuuc kaas oo laqaato marka ay dhameeyaan fasalka 11-aad xilga xagaaga (summer) ka dib waxaa fursad loo siinayaa in ay noqdaadaan shaqaale ku meel gaar ah (internship) oo lacag la siinayo inta ay ku jiraan fasalka 12-aad. Ardaydu waxay baranayaan xirfado, waxay helayaan dhaqaale, sidoo kale waxay helayaan kiridhit ku began fasalda loo ayaqaano electives, waa fasalda dheeraadka ah. Wixii faah faahin ah kala xiriir lataliayaha dugsiga sare ama booqo genesysworks.org ama wac 651-744-1323.